နားခိုရာ: what's wrong with my blog?
ကျွန်တော့်ရဲ့ ဘလော့ကို မနေ့ကနဲ့ ဒီနေ့မှာ hit rate တွေ အဆ မတန် တက်လာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အရင်က ပုံမှန် အများဆုံးမှ 100 ကျော်လောက်ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဒီ နှစ်ရက်မှာ ရှစ်ရာကျော်ဖြစ်ပြီး shinstat counter ကလည်း traffic များလို့တဲ့ ဆက် count မလုပ်ပေးတော့ဘူး။ ဒီနေ့အတွက် 863 မှာရပ်သွားပြီ။ tinycounter ကလည်း ခဏပျောက်သွားပါတယ်။ မနက် ရုံးရောက်ပြီး blog ကိုဖွင့်လိုက်တော့ free-onlineuse က 25 online လို့ပြနေတယ်။ oh my god! ဘာတွေများဖြစ်ကုန်လဲ။ အခု ဒီ post ကိုရေးနေတုန်းမှာလဲ 11 online ရှိပါသတဲ့။
ဒါနဲ့ သုံးလက်စ tinycounter ကများမှားနေလားလို့ Sitemeter ကိုတင်ထားတော့လည်း hit တွေ ဆက်တက် နေတာကို တွေ့ပါတယ်။ Shinstat ရဲ့ history တွေအရ search engine တွေက visit တွေလာပါသတဲ့။ သူတို့ ဘာလာလုပ်တာလဲ? ကျွန်တော့် ဘလော့လေးကို attack လုပ်ချင်ကြလို့လား???
ဆရာသော်တာဆွေပြောသလို ဘိုဘိုးအောင် ဗိုလ်ချုပ်ဈေးကိုလာပြီး ဘရာစီယာနှစ်ထယ် ၀ယ်သွားတယ် ဆိုတာမျိုးလို အံ့ဘွယ်ဘနန်းသတင်းထူးပါတဲ့ ပို့စ်မျိုးလဲ မရေးမိပါဘူး။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်က မချိုသင်းတို့ မနိုင်းနိုင်းစနေတို့လိုလဲ စာရေးကောင်းသူမဟုတ်။ ရောက်တတ်ရာရာလေးတွေကို လျှောက်ရေးနေတဲ့သူလေ :D
ဘယ်လိုကြောင့်များဖြစ်နိုင်ပါသလဲ .... နားလည်တတ်ကျွမ်း အတွေ့အကြုံရှိသူများ comment ပေးတော်မူကြပါခင်ဗျား
Posted by little moon at 12:29 PM
တို့ကတော့ ခုမှ သိလို့ လာဖတ်ပြီ။